Radio Sudoorawaz 95 Mhz डाक्टर केसी सजायको भागीदार नबन्न, के भगवान हुन् र ?
संजिव कार्की:.देशको मूल कानुन र संबिधान भन्दा माथि कोहि छैनन् । कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान र एकै हैसियतमा रहनुपर्छ । विधिशास्त्रले कसैलाई नजिक र कसैलाई पर गर्न सुहाउन्न र गर्न मिल्दैन । कानुन नियम र ऐनले तेरो, मेरो र आफु अनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल ब्याख्या विश्लेषण दण्ड र पुरस्कार गर्न हुँदैन यो कानुनको पहिलो र अन्तिम शर्त हो । न्यायिक फैसलामा असहमति जनाउन पाइन्छ । मर्का पर्‍यो भन्न पाइन्छ । तर अस्विकार गर्न र अपमान गर्न पाइन्न । पुनरावेदन गर्न पाइन्छ ,गुनासो राख्न सकिन्छ, म चै मान्दिन भन्न पाइन्न । भलै कतिपय फैसला बिबादित र अशोभनीय नै किन नहुन ? कमजोरी मान्छेले गर्ने हो तर नियत बदनियत र निहितार्थ गरीएको कमजोरी र सामान्य मानवीय भुल फरक कुरा हुन् एकै होइनन् ।